Kedu ihe kachasị ukwuu na-agba ịnyịnya ígwè? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Nnukwu ụkwụ igwe - olee otu ị ga-esi kpebie
Kedu ihe kachasị ukwuu na-agba ịnyịnya ígwè?
Ọtụtụ okenye ugwuanyịnya igwejiri 26 anụ ọhịawiil. Obere ugwu ndi ntorobiaanyịnya igwejiri 24 anụ ọhịawiil. Naibu700C (29 nke anụ ọhịa ahụ)wiilenweela mmasị na nso nso a n'etiti ụzọigwendị na-emepụta ihe.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị kpachapụrụ anya na Biketech na nke mbụ, ị ga-ama maka nrụgide dị ukwuu na njikọta na obosara sara mbara. Ugbu a ị nwere ike ghara ịghọta ihe kpatara enwere nnukwu mmụba a, mana nke ahụ dị mma n'ihi na anyị ga-egwupụta ma chọpụta. Ihe mere anyi jiri chee banyere ya n'oge na adighi anya bu nbata nke B B nke mara mma ma dikwa nma nke oma SES 4.5 aar diski wiil na ubochi mbu n’ile ha n’ihu, ha bu mb, ha nwere profaịlụ rim di iche n’ihu na azu ma ha kegidere Chris King ehiwe, ma ha na-ekwo ekworo n'ihi na ha na-emebi ala ọhụrụ n'ụzọ na-akpali akpali, ha ga-amalite site na profaịlụ a kapịrị ọnụ nke diski na mgbe ahụ ha kwukwara n'eziokwu ihe mere m ji hụkarị rim ndị a na igwe ịgba ọsọ na-atụle na 31 na a ọkara mil obosara obosara dị oké mkpa 25 nnù n'ime rim obosara The imewe bụ nanị mgbe a na-adịbeghị anya mmepe na ụzọ bike imewe onwe ya ga-ekwe omume.
Eziokwu ahụ bụ na ha akọwaghị pụtara na ha nwere ike ịdị obosara n'ihi na enweghị mmachi obosara nke ndị calipers na ọzọ akọwapụtaghị ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ikike karịa n'ihi na ndị caliper anaghị egbochi gị ọzọ, ọ bụ ya mere anyị ji chee banyere ya, kedu maka ajụjụ mbụ anyị, kedụ ihe kpatara taya ndị a jiri na-agbasawanye agbasa? ripsnow bụ otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị, mana ọ bụkwa uru ndị kachasị dị mkpa nke taya buru ibu na -emepụta nkwụsi ike na-agagharị. O siri ike ịmata ihe anyị rutere na akpa a ebe ọ bụ na data dị adị na-apụ apụ kemgbe oge ụfọdụ, mana ọ dị ebe ọ bụla na taya 28C na-apụta ihe ruru 2 ruo 3 watts ngwa ngwa karịa nke 25C taya ya na nke ahụ bụ kwa wheel na mara na 40 na ihe dị iche bụ ọbụna ibu na 23 na ihe mere ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ tiori idu ke udi nke taya akara ukwu na udi ka na-amụba obosara nke a taya akara ukwu na-aghọ mkpumkpu ma si otú Rolling ndị na-eguzogide na-mma , nke dị ezigbo mkpa ugbu a, Otú ọ dị, aghọtaghị na ị chọrọ ma a obosara rim na a obosara taya aka jirichaa uru ndị a n'ihi na cross-sectional profaịlụ nke taya dị ezigbo mkpa mgbe na-eche echiche banyere nke a kọntaktị patch udi Chee echiche banyere ya , ma profaịlụ cross-sectional dịkwa mkpa maka ntụgharị na taya, nke dị ntakịrị ka iwe iwe ị na-enweta mgbe nrụgide ahụ dị ala n'ezie, n'ihi ngbanwe pụtara ntụgharị esemokwu na nke a na esemokwu pụtara ịba ụba na-agbagide nguzogide n'okwu a, yabụ na 28 C ilo a ị hụrụ na ọkwa a dị obosara nke ugbu a na-atụle oge ruo 31 na nso nso that na profaịlụ cross-sectional bụ n'ezie square, na-akwado nke ọma na n'ezie nke ọma na-akwado n'azụ, nke ahụ pụtakwara na ọ bụ ihe aerodynamic iji gụpụta nsonaazụ ndị a ugbu a na nyocha ụlọ nyocha na akụrụngwa a kụrụ nke ọma, mana ihe na-atọ ụtọ karị bụ nnwale na ụzọ Open ahụ, nke igwe kwụ otu ebe na-eduga, na-atụ aro na ule ụlọ nyocha bụ akụkụ dị mkpa nke ịnya ụgbọ ala na nke ahụ bụ ịma jijiji na ọ bụ mkpọtụ okporo ụzọ na-eme ka anyị belata ma ọ na-atọ ụtọ, ọ bụghị ya, n'ihi na mgbe anyị na-aga ije n'elu okwute ma ọ bụ ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ, ọ dị ka o doro anya na ịma jijiji na ịma jijiji na-ebelata anyị, anyị nwere ike na-eche ya, mana gịnị kpatara ya, ọ bụrụ na anyị elelee mbadamba ntụpọ anyị abịaghị n'otu nkwubi okwu, ọ dị nwute na isi igwe kwụ otu ebe anyị chọpụtara na taya na-ebuwanye ibu nke nwere obere nsogbu na-apụta. budata ngwa ngwa karịa nke siri ike mgbe anyị kwuru obere nrụgide. N'ezie anyị pụtara ya, enwere m naanị 50 psi na ndị ahụ 28 na ihe kpatara ya? bụ n'ihi na ụlọ nyocha na-arụ ọrụ ike siri ike na-apụta ngwa ngwa n'ihi na enwere mfu ọhụụ, na -emepụta ngagharị na esemokwu nke anyị kwurịtara banyere ya, mana ịkwesịrị icheta ịkwụsị iwepụ nrụgide gị Gbanyụọ taya ma ọ bụrụ na ha amalite squirming Ause na ebe a ị ga-akwụsịlata ọzọ ugbu a, enwere m ekele na mbenata nguzogide na-agagharị agaghị abụrịrị ihe niile na njedebe maka anyị niile, mana ọ dị ka ọ doro anya na otu nnukwu uru dị ukwuu nke ibelata mkpọtụ nkasi obi ga-abụ .
Maka anyị Lacey ị nwere ike ịnya ụgbọ ala kachasị mma n'ụwa, mana ọ bụrụ na ịnwe taya dị warara dị warara na ya, ọ gaghị enwe ntụsara ahụ dị ka nke siri ike, nke klaasị yana taya 28c ndị ọzọ Emechara taya zuru oke na-enye gị njigide karịa ugbua. na-abịaghachi na nke a dum kọntaktị elu ihe kamakwa a softer taya bụ s Nchekwa n'okporo ụzọ ugbu a m na-ekweta, mgbe ụfọdụ m na-eche a obere ochie m na-achọghị ịnwale na onye si kpamkpam, ma ọbụna na m ugbu a gbapụrụ ọsọ, m enwe obi iru ala mgbe m dabere n'ime ya. Enwere akụkụ ọzọ na njikọta zuru oke d olu ikuku, nke kwesịrị ịpụta na o yikarịrị ka ị ga-eme onwe gị ka ọ dị ala ọbụna na nrụgide dị ala, mgbe ahụ ị gbakwunye ndị a na-emepụta ihe ndị a, anyị na-agba agba tubeless anyị na-ama ezigbo mma na ụlọ na-emesi obi ike ihe ị Mụta site na nkọwa anyị na-ahụ mgbe niile, gịnị kpatara, mgbe, gịnị kpatara ya? Ihe njikọ ahụ dị mma nke na uru ka na-agba ọsọ 25 na ọ bụ ezigbo isi uru dị iche iche na-adaberekarị n'ihe kachasị ọsọ ka ọ wee bụrụ nke mbụ na mbụ, dịka m kwuru na mbụ, ị ga-achọ ya igwe diski breeki. christened gold, na ndị ọkachamara doro anya na enweghị m ike iji ndị ahụ, mana n'ezie enwere eziokwu na taya buru ibu dị ntakịrị, ndị a bụ ihe dị ka gram 20 kwa wiil karịa karịa ụmụnne ha 25 wee nwee eziokwu. na wider taya nwere aerodynamic drawback ka wider taya, ma ọ bụrụ na ị na-agbalị dabara a wider taya na a rim imewe maka a23 ma ọ bụ 25 na penalties bụ nnọọ elu na mgbe n'ezie na e nwere ọdịnala na Pro Peloton nwere ike mgbe ụfọdụ kọwara dị ka tanka mmanụ. Ọ na-ewe ogologo oge iji gbanwee ụzọ.
Anyị na-ahụ ọnụọgụ uru ndị, n'agbanyeghị uru doro anya maka ha, ka anaghị eji igwe kwụ otu ebe, nke maka taya nwere ike ịdị ka ọ ga-atọ ụtọ ịhụ ebe ihe a niile dị, echere m oke abụba anyị na onye ga-abata n'ụgbọ hụbeghị data ahụ, ọ na-esiri ike ịgbagha ya n'ihi ya, echere m na ọdịnihu ga-adị mma karịa ugbu a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ntakịrị ozi ndị ọzọ na wiil ndị ahụ m na-anya, yana anyị nwere edemede na-enweghị ntọala na ntọala ndị a, mana ọzọ, ị gaghị emeri ọzọ yabụ rịọ mgbaghara maka nke a ma ọ bụ hụ site na site na guru n'azụ MVwheels n'ime ikuku ikuku ka ị pịa ebe ahụ, ma ọ bụghị na ijide GCN , ime nke a pịa ụwa niile
Nnukwu ụkwụ igwe kwụ otu ebe ka mma?
Ntawiilna-azaghachi nduzi nke na-emeigwe kwụ otu ebekaria manoeuvrable. Nke a na enyere aka na uzo di na mmiri. Otú ọ dị, ibuwiilnweemmatraction, n'ihi roba ọzọ jikọtara ya na ala.Ọnwa Ise 10, 2020
Bụ nnukwu sr2 wiil carbon?
Ngwongwo anyi di iche iche nke aluminom nacarbon wiilbụ ihe ndị magburu onwe nweta nkwalite maka ihe ọ bụla igwe kwụ otu ebe. Anyị na-enye ụyọkọ okwute na igwe kwụ otu ebewiil, e mere iji belata ibu, dịkwuo ọsọ ma melite na-agba ịnyịnya àgwà anya-ụzọ. Ihe niilewiiltent bụ tubeless-njikere na-abịa na afọ abụọ akwụkwọ ikike.
Ndị mmadụ na-echekarị ihe dị iche na wiilị alloy na wiil carbon, mana gịnị bụ ihe dị iche n’ezie? Gịnị wheelie bụ ihe dị iche nke mere na ọtụtụ anyịnya igwe na alloy wiil abịa ọkọlọtọ na n'ozuzu naanị ndị kasị oké ọnụ ụzọ anyịnya igwe na-abịa na carbon wiil nke na-ekwu na ha bụ ndị a na-ewu ewu ụdị nweta nkwalite? Akụrụngwa maka ọtụtụ igwe kwụ otu ebe eee ma ị nwere ike iburu ụzọ wiil carbon maka ihe dị ka £ 500 na $ 700 ma ọ bụrụ na ị nọ na US mana ha na-esikwa na £ 1,000 ruo £ 2,000 pụta n'ihi ụgwọ nke usoro nrụpụta ma e jiri ya tụnyere alloy alloy, n’ụzọ dị iche, aluminom rim na-adịkarị site na 100 ruo 700 pound ma ọ bụ dollar maka ezigbo mma ụzọ, ya mere ịzụta otu rim carbon nwere ike ịdị oke ọnụ mgbe ị na-atụle ịzụrụ, n’isiokwu a anyị ga-agwa gị niile ị nwere ike gbasara esemokwu dị mkpa ịmara n'etiti ha abụọ ka i wee nwee ike ime mkpebi kacha mma, ka anyị rute ya, ka anyị mee ya mana na mgbakwunye ọnụahịa gịnị bụ ihe dị iche m nụrụ ka ị na-arịọ ma ugbu a bụ ihe izizi pụtara ìhè nke ndị a nke ahụ bụ maka Ndị nwoke na-ama jijiji mgbe niile, ọ bụghị ha, ị makwaara na ọ nwere ike ọ gaghị abụ ọkwọ ụgbọ ọsọ kachasị ọsọ, mana m ka nwere ike ile anya ngwa ngwa ịlụ di na nwunye nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa, mana ọdịnala aluminom nwere ụzọ mgbochi na-enweghị ntụpọ na nke ahụ bụ n'ihi ha mebiri elu ahụ mere ka agba agbapụ. Ndị na-emepụta ahụ hapụrụ ha ebe ahụ, mana nke ahụ na-agbanwe ma bụrụ ihe akaebe nke na enwere m ihe ngosi na ịnyịnya ígwè Hanks ndị a na-eme ka brek na-ewu ewu karịa na ịnyịnya ígwè ịgba ọsọ na, karịa ihe niile, dị ọnụ ala karịa - ma ọ bụrụ na ị nwere wheel breeki aluminom, i nwere ike tinye ya na agba ya agba ọ bụla dị ka braking na-ewere ọnọdụ na diski ma ya mere na ọ naghị eyi agba ahụ na rim na nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịnweta wiil dị larịị dịka ọhụụ a, gbalịa Max 30, mana ya nwere ike ime nke a kpamkpam nwere nwa ụdị nke fọrọ nke nta carbon anya nke bụ n'ezie klas, n'adịghị ka anya, carbon rims nwekwara ike mere Mkpa ọkụ ka kwekọrọ ekwekọ alloy wiil na nwekwara ihe aerodynamic n'ihi na omimi nke rim nwere ike mee ka ukwuu miri ma ọ bụrụ ị nwere nnukwu miri alloy rim, ọ ga-abụ nnọọ arọ ma eleghị anya na-ata erughị ala na-akwọ ụgbọala, otú carbon rim na-abịa n'ime ya ebe a The ọzọ nnukwu Un Ihe dị iche bụ ibu - larịị aluminum wheelset now a na-erikpu abụọ kilogram fo r a ụzọ na-enweghị taya, ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere nke a carbon clincher taya na a miri emi, rims dị ka nke a ọhụụMetron 55na dịrị ihe dị ka 1,500 gram maka a ụzọ na-enweghị taya, na-azọpụta ihe dị ka ọkara kilo, ma carbon wiil nwere ike ịbụ ọbụna Mkpa ọkụ. Yabụ mgbe ị nwere igwe ịnyịnya igwe kachasị elu, ha nwere ike ịdị obere ka kilogram kwa otu, nke ahụ nwere ike ọ gaghị ada ụda ka ukwuu, mana ọ ga-ahụ nke ọma mgbe ị gbatịchara ya, ọkachasị mgbe ị na-agbatị maka ịrịgo.
Mpaghara nke wheel ebe ibu kachasị dị mkpa bụ oghere na ihe kpatara nke a bụ na oke ebe a nwere oge ka ukwuu na etiti axis nke wiil ahụ, nke pụtara na ọ bụrụ na ị mee ụkpụrụ, ị na - agbatị ọsọ ọtụtụ ntụgharị ọrụ aka ma ọ bụ ịnwe mkparịta ụka na-agagharị agagharị, wiil kachasị uru nwere ike ịbụ ihe na-adịchaghị mfe ma obere ụkwụ aluminom nwere ike ịdị ukwuu ma ị nwere ike iburu 1,300 ruo 1,400 gram nke dị ọkụ, mba, ọ bụghị nke ukwuu, mana ị nwere ike zoputa gram 300 ọzọ site na ịhọrọ igwe kwụ otu ebe dị ka Vision Metron 30tubular, nke anyị na-enweghị ebe a, mana nke ahụ bụ nnukwu ego nchekwa, ee na nke ahụ anaghị ada ụda karịa, mana ọ bụrụ na ị gafere ụkwụ ma ọ bụ mpụ tiwara, nke ahụ bụ ezigbo ihe dị iche ugbu a, na-akpali mmasị, m na-agba ịnyịnya carbon na James bụ. Gbaa ịnyịnya aluminum wiil, ọhụụ bụ Mets na 55s na James mere ka Trimack Surfy na ha abụọ na-atụle ihe dịka otu bọlbụ na gburugburu 1,500 grams, mana isi ihe dị iche bụ na nnukwu ego ahụ na-arụ ọrụ, ọ bụ aerodynamic n'ihi na ha dị omimi karịa ha abịa anyị ọzọ dị iche, aerodynamics, nke bụ nnukwu uru karịa carbon rims bụAerodynamik ị nwere ike ịhọrọ maka miri emi miri emi aerodynamic anyịnya igwe dị ka Ali'sgot ebe a na dị nnọọ a ga-esi a adịgide na ị ụgbọala ngwa ngwa na otu mgbalị na m na-ekwu na-adịghị chọrọ na ugbu a, olee otú ọtụtụ ihe ngwa ngwa a DeepSection Wheelis ma ibu ma ọ bụ ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ ọ bụghị nnọọ dabere na gị n'ọnọdụ, otú a mere ka e nyochara ọtụtụ na ọtụtụ dị iche iche onwe ha na isi mmalite, na ke ofụri ofụri ị nwere ike na-atụ anya ịzọpụta banyere 30 sekọnd karịrị 40 kilomita na 40 kilomita kwa awa site na iji miri emi wheel dị ka nke a n'elu a ewepụghị wheel dị ka nke a na-ada nnọọ a otutu. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eme mgbalị iji nweta ihe aerodynamic na ngwa ngwa, mgbe ahụ jụụ wiil bụ nhọrọ ziri ezi mgbe ị na-braking.If ị na-eji rim brek, aluminum rims na-anabata ka ha nwere mma braking arụmọrụ karịa carbon rims, na nke a bụ ihe a pụrụ iche ikwubiga okwu ókè na mgbochi mmiri aluminom rim nke na-enye mma okpomọkụ dissipation karịa a carbon rim ma ọ bụrụ na ị bụ a arọ onye na-agba ma ọ bụ sere na brek ala nkpoda ugwu ga-ekwe omume delaminate carbon, ma Nsukka mere nke a site texturing rim na mma ọ Resin ofu.
Mgbe ị na - eji brek ndị a, ihe ejiri gị mee adịghị mkpa ebe a na - eme braking niile na diski na uru ọzọ bụ ime ka Carbon rim nwere ike ịdị oke ọnụ dịka ọ dị mma iji ya enweghị ike idozi ya. ma ọ bụghị nsogbu na yourun na discs na-ada ezigbo mma ruo mgbe ọkara sized taya dị ka ndị a nwere ike ịbụ ihe siri ike na cross ifufe na nke a bụ ihe nkịtị na-echegbu ndị mmadụ dị mwute ikwu na Coralie na-egosi gị taa n'ihi na taa bụ jụụ ụbọchị nke afọ, ma m Enweela akụkụ dị omimi n'ọtụtụ ọnọdụ ma enwere m ike ịsị na ọ bụghị nsogbu dị njọ dị ka ọtụtụ ndị chere na ọ bụ ihe ka mma. N'iji ụdị rim nke oge a, ọ nwere ike bụrụ nsogbu karịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ọkụ dị ka m, mana m ga-aga maka igwe kwụ otu ebe ka ogo 40 milimita elere anya m nwere ebe a zuru oke na ọ dị mfe ya aerodynamics ọ na - eme ihe niile, ee ọ gaghị ada ada na crosswinds, nke kachasị mma mgbe ị na - ekwu maka nkwesi ike, kedu maka nke ahụ? Wheels n'ezie, ee, inwe a stiif ụzọ nke wiil bụ a n'ezie dị mkpa àgwà see pedals na ọ bụkwa ihe mara mma na ndị ọzọ onwe-obi ike nwere a stiif ụzọ nke ụkwụ na nkuku, ma ọ dị mkpa na na na ọ bụ nnukwu akwukwo na ị nwere ike ime wiil siri ike nke aluminom ma ọ bụ carbon naanị ihe dị iche ga-abụ na ụkwụ aluminom nwere ike ịdị ntakịrị karịa achọghị m iji ya gwuo egwu, ha ji ihe ọmụma a kwadebe ya. Olileanya ugbu a ị nwere ike ịhọrọ wiil nke kachasị mma maka mkpa gị ma ọ bụrụ na ịchọta na ọ bara uru, biko hapụ ya n'ihi na ọ ga-enyere ndị ọzọ aka ịchọta ya ee ma ọ bụrụ na ị na-ele edemede banyere ọdịiche dị n'etiti aluminom ma chọọ ịhụ igwe anyịnya, Pịa ebe a
Nnukwu ibu ezigbo akara igwe kwụ otu ebe?
Ee, dịka ụwa kachasị ukwuuemeputankeigwe,Nnukwuanyịnya igwe bụezi.Nnukwu igwe kwụ otu ebe, dị ka nnukwuakara igwe kwụ otu ebeke ererimbot, na-mara dị ka otu n'imenke kacha mmammefu egoụdịrị igwe kwụ otu ebe. Ọ na-enweta ọkwa dị elu na ugwu ya na ngwakọigwe kwụ otu ebeedemede.Nnukwua makwaara maka inye njem dị mma.
Ahuru m ya na ele ya, obu Oriole. - Oh, ihe na-acha uhie uhie? - Eeh. (mumble) Ee. (mumble) Oh, pụọ. (egwu obi ụtọ) Onye ọ bụla, Abụ m Mike Kazimer.
Anyị nọ ebe a na Sedona, Arizona maka njem Pinkbike kwa afọ. Anyị na-ele anya n'ọtụtụ igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ala. N'oge a ga-elekwasị anya na Nnukwu Ọnọdụ.
Giant na-ekwu na Stance bụ mmeghe zuru oke maka egwu egwu egwu, ọ na-enye ndị ọkwọ ụgbọ mmiri nwere mmasị na ụfọdụ ụzọ ụzọ ụkwụ gafere, ebe enwere ike zụrụ igwe kwụ otu puku $ 1,800 ma tinye oche oche dropper nke mara mma maka nkwụsịtụ zuru ezu. igwe kwụ otu ebe 29-inch wiil, ndụ 130-millimita ndụdụ na 120-millimita azụ nkwusioru njem. The jiometrị nke a igwe kwụ otu ebe bụ dịtụ mgbanwe, iru anyị ibu Large bụ 454 millimeters.
Utu uzo ahụ dị elu na ogo 67.5. Na oche oche nke 75 degrees.
Chainstays na a 438 millimita igwe kwụ otu ebe abụghị iji na-achọ ndị na-achọ enduro ama. Emeela ya maka ihe ọhụrụ na egwuregwu ahụ; onye chọrọ ịmara igwe kwụ otu ebe n’efu n’efu efu ọtụtụ puku na puku. Igwe kwụ otu ebe a bụ Giant's Flex Point nkwusioru imewe.
Ihu ọma ọ bụ otu nkwonkwo nkwonkwo a na-achụga na ị gaghị ahụ nrịbama niile na oche oche ma ọ bụ ịnọ n'agbụ. Mfe dị oke mkpa ebe a, nke nwere ike ịchekwa ha obere ego na nrụpụta ma e jiri ya tụnyere ihe mgbagwoju anya Maestro ị nwere ike nweta na onyinye ha dị elu maka $ 1,800? Na Stance, ị nwetara SX 12-speed -Drive si na SRAMRockShox Recon fork, RockShox Monarch damper, Shimano na-achịkwa brekị, ị nwere Maxxis Forecaster taya na-agba ọsọ ọsọ maka taya. Ogwe osisi Aluminom nwere eriri USB dị n'ime, oghere maka karama mmiri n'ihu triangle ihu, nche nche na agbụ ígwè na ọ nwere ike ịrịgo onye na-egbu egbu ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Enweghị usoro ISCG taabụ ụdị usoro ntuziaka usoro, ịkwesịrị iji ugwu a derailleur. Ọfọn, atụmatụ ọzọ dị ntakịrị nke anyị na-amataghị ruo mgbe igwe kwụ otu ebe pụtara maka ule. Ọ na-eji a tọhapụ ngwa ngwa.
Ugbu a, anyị nwere igwe kwụ otu ebe asatọ na ule ahụ ma ọ bụ ya bụ naanị onye nwere ngwa ngwa ịhapụ kama axle. N'ebe a kwa, enwere ike ịchekwa ntakịrị ego, mana anyị ga-ekwurịtakwu banyere nke ahụ na echiche ịnya ụgbọ ala. Nke ahụ bụ isi.
Anyị na-agba ịnyịnya Nnukwu Ogologo izu ole na ole gara aga ka anyị banye n'ime echiche ndị ahụ. (egwu na-ada ụda) - Ọ dị mma, anyị gbagoro Giant Stance ebe a na Sedona, Arizona, ọ bụ 120 millimeters na azụ 130 na ihu Recon fork n'ihu Kazimer, ole nrụgide ikuku ị na-agba? - Dị ka 120 ruo 130 pound, ha na-akwado ihe dị ka 85 ruo 100 - 85 ruo 100. Yabụ ịkwesịrị ịdebanye aha ndụdụ ahụ ọzọ, tinye mgbakwunye 20 psi na.
Yabụ iji nweta nkwado ahụ, anyị ga-agbakwunye 25% Sag, Taya, tubeless Ready, 20 psi maka b n'azụ. Na ee, na ntọlite ​​bụ ezigbo mfe ọzọ. (egwu di nro) Ka anyi rigoro, gini ka i chere? - Crịgo na igwe kwụ otu ebe a nwere mmetuta nke ụlọ akwụkwọ ochie - dị ka mmetụta 90s - ee, ị mara mma n'ihu, - ị maara na ọ na-agbagharị, ọmarịcha ụzọ dị elu, ọ bụghị nke ogologo , nwere mpempe akwụkwọ millimita 60, na-eduzi ntakịrị ihe.
Ọtụtụ n'ime ndị ahụ ogologo, slacker anyịnya igwe anyị na-agba ịnyịnya nwere mụrụmụrụ njikwa - ha adịghị, ọ bụghị mụrụmụrụ mgbe ha looser - ugbu a ọ bụghị gị, ma ọ bụrụ na ndị niile na ọnụ ọgụgụ na-aga nke ọma ọnụ ngwugwu, ma ọ bụ ndị lightest anyịnya igwe Anyị nwere 31.6 pound ebe a, nke bụ na nnukwu adịghị mfe, ma cheta, anyị na-elekwasị anya na oké ọnụ anyịnya igwe, n'ihi ya, anyị nwere ụfọdụ anyịnya igwe ebe a na-asọ ndị 35 pound mark.four pound na-eme ka otu Ndiiche.
Ya mere, igwe kwụ otu ebe a dị ntakịrị ọkụ ma nwee taya na-agagharị ngwa ngwa. Ọ na - enyere gị aka iru n’elu ugwu site na obere mbọ - ee, yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ọsọ n’ofe obodo, ị gaghị agba ihe ọ bụla oke - ị chọrọ ịrịgo ọtụtụ ugwu ugwu. . Ihe dika - Ee, - O doro anya. (upbeat music) Odi, ya mere i rutere elu ugwu, i ghaghachitere.
Ma nke a bụ ebe akụkọ a na - eme ihe kacha njọ - Ee, ọ na - atọ ụtọ, na - agbadata na ya bụ ahụmịhe na - atọ ụtọ. Have nwere obere profaịlụ taya, ma ọ bụghị n'ezie na taya nwere ike nweta site na ha. Ọ bụ etiti ahụ n'onwe ya, jiometrị, na ikekwe enweghị isi ike m ga-asị. - The stern bụ a ngwa ngwa ntọhapụ Enwere m mmetụta na e nwere ihe zuru ezu n'ebe ahụ.
Mgbe ị batara, mgbe ị banyere n'ime ihe siri ike, ngwa ngwa. Ọ na-adị ka igwe kwụ otu ebe na-eme nke a, dịka ọ naghị adị ya ka ọ ga - ihu ihu azụ ejikọtara igwe kwụ otu ebe. Ebughị n'obi maka ihe ọ bụla na-ada oke ụda, mana enwere nhọrọ dị ike karịa. - Ee, ọ dị mma ịnọdụ ala n’elu igwe kwụ otu ebe ma mara na nke a nwere ntakịrị ntakịrị maka njehie.
Ga-anọnyere onye a. Ma ọ bụrụ na ị pịgharịa ya oke ọ ga - eme ka ị mara - Hey mana hey ị nwere ike? Nweta wheel azụ dị ngwa ngwa, ọ nwere ugwu derailleur maka okpukpu atọ gị.- Njikere ịga.- Yabụ, n'ezie, anyị anaghị anwa ịgbara Giant nnukwu ike ebe a.
Mana nsonaazụ njedebe bụ etiti ahụ, ọ dị ka ọ mere 5, 6, 7 afọ gara aga, ọ naghị adị ka oge a dị ka nhọrọ ndị ọzọ ebe a, geometry and construction. - Ee, o yiri ka ọ bụ obere oge. Nke ahụ bụ ihe na-akụda mmụọ na ya.
Refeyim a nnukwu ụlọ ọrụ, otu n'ime ndị kasị ibu si n'ebe, ha nwere niile ego na-eme ka a igwe kwụ otu ebe na oge a na geometry na a ọma price. Nke a bụ igwe kwụ otu ebe na akwụkwọ, ọnụahịa a dị mma. You makwaara, ka ndị na-abanye n'egwuregwu ahụ ga-akawanye mma.
Ma enwere ọtụtụ ihe na-egbochi igwe kwụ otu ebe a. - Ee, maa, m na-ekwu, M ga-ọbụna na-ekwu na 1,400 -Dollar Bossnutis nwere ike ịbụ a obere ihe pable igwe kwụ otu ebe na ọ na-adabere eku. Ọ bụ stiffer etiti na-eji mma jiometrị - Kpọmkwem - Ee. (egwu obi ụtọ) - Ihe na-atọ ọchị ebe a, ọ bụ ezie na anyị na-anọdụ ala ebe a ma na-ekwu okwu banyere Giant na agba Kazimer.
Enwere m oge m kachasị ọsọ na mgbago. Ugbu a, ugwu a adịkwaghị oke ụda, ọ bụ onye nnọchi anya ịgba ịnyịnya ígwè. O siri ike n’elu ụlọ.
O nwere ụfọdụ oke, ihe na-asọ asọ, nwere obere oge kachasị ngwa ngwa na ihe a - mana kedụ nchebe ị nwere mgbe ị tinyere oge ahụ? - Onwe, Echere m na m na-eji na-atụ egwu obere anya obe crossgba ịnyịnya ígwè mba ọsọ ọsọ na-agba ịnyịnya ígwè m na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ, ihe ndị siri ike karị na enweghị m ntụsara ahụ na ntọala ndị ahụ. - Ee, m na-agba ịnyịnya nke abụọ kachasị m ngwa ngwa na igwe kwụ otu ebe a, echere m na m na-agakarị na nrịgo bụ nke asaa m nke asatọ kachasị nwayọ maka ọdịda. Ya mere ọrịrị ahụ dị oke ọsọ ọsọ, ị maara, ndị taya profaịlụ ndị ahụ dị ntakịrị karịa ọ dị mfe, mana dịka m kwuru, mgbago ahụ bụ ebe a na-ejide igwe kwụ otu ebe. (Joy Music) Anyị na-elele igwe kwụ otu a $ 1,800 a nke na-abịa na post dropper ma dikwuo ntakịrị n'ime ihe ndị a.
Kedu ihe kachasị amasị gị? Akụrụngwa na nke a? - Nke ahụ bụ ajụjụ aghụghọ, n’ihi na (ọchị) - Enwere m ike ime nke ahụ, oche oche ọdụ ọdụ na post kọntaktị a. Ọ dị ezigbo mma. - Akụkụ kachasị amasị gị na igwe $ 1,800 a bụ oche nchekwa oche? - Eeh. - Nke ahụ bụ ebe anyị nọ. - Amaara m, mana ọ bụ ọfụma pere mpe ọ na - arụ ọrụ nke ọma.
Echere m na ọ bụ ọkacha mmasị m n'ihi na amaara m igwe kwụ otu ebe ndị a nwere ọghọm ndị na-anaghị arụ ọrụ nke ọma. Job nwere ọkwa a na ịnyịnya ígwè na igwe igwe na ọnụahịa a dị mma ịhụ, mana enwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ na-adịghị adọrọ mmasị. - Number otu bụ brekị.
Yabụ ndị a bụ breeki ịnyịnya ígwè Shimano abụọ, pistin resin, resin pad naanị rotor mmechi na efu mbụ riri, nke ahụ bụ ikwubiga okwu ókè, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezughị mbụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị m mma mgbe ọ bụla - ee, m na-ekwu na enwere ihe kpatara ndị levers ndị a ka ha jiri iji mkpịsị aka atọ, ị ga-eji ihe mkpịsị aka atọ. Ọ bụ naanị otu n'ime ndị kasị ala ugwu gbakwasara ụkwụ igwe brek Shimano na-eme. Ọnụahịa ere dị oke ala.
Know maara ihe kpatara igwe kwụ otu ebe a, mana mgbe anyị na-agba ịnyịnya ugwu ọ dị mma ịnwe brek ọma. Ekwuola m ntakịrị banyere ndụdụ Recon a, anyị na-ekwukwa ya, ịkwesịrị itinye ọtụtụ ikuku ikuku na ya iji mee ka ọ dị mma ma ọ dịkarịa ala mee ka ị dị elu na njem - ọ bụrụ na ị na-agba ndụdụ mara mma, dị ka mgbe ị na-aga ịbụ a Pike, ị bụ m ga-achọpụta ihe dị iche ma ọ bụrụ na ị na-a ọhụrụ onye na-agba na-amalite na na Reconis agaghị egwu na m na-ekwu maka $ 1,800 ọ bụ eleghị anya mma maka igwe kwụ otu ebe, ma ị ga-overprint na ndụdụ, ma eleghị anya, na-eji a obere ihe ala-ọsọ mkpakọ na alkpọ oku elu ebe a na-eme ka ọ na-arụ ọrụ. O zuola maka gị.- Yah, echere m na taya ahụ.
Maxxis Forecasters bụ taya, emere ha maka igwe kwụ otu ebe a na-agba ọsọ ọsọ. Nwere ike tinye on a meatier taya ma ọ bụrụ na ị chọrọ a bit ọzọ traction, ma n'ihi na-aga ngwa ngwa ha bụ ndị mara mma nke ukwuu ebe a na Sedona m ga-esi na nke ọma na - ya mere na ị zụta onwe gị a Giant Stance. Kedu ihe ị ga-emezi, eku? - Aka nri, ee, nke ahụ bụ akụkụ na-akụda mmụọ.
Igwe mmefu ego bu ezigbo ebe ibido, ma ikwesiri inwere nke nwere chassis siri ike ichota ihe di nma karie ka ha na aru, obu na ego ndi ozo. Ma igwe kwụ otu ebe a enweghị igwe kwụ otu ebe. Onweghi ihe ị ga - emeli banyere nke ahụ.
Geometry enweghị ike gbanwee; ị gaghị agbatị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ mee ụdị ihe ahụ, yabụ echere m na ọtụtụ ndị na-agba ụkwụ na ụkwụ ebe ha nwere ohere ịnyagharị ụzọ ụkwụ ndị na-eme ihe ike ma nwee ọganiihu n'onwe ha, pụọ na igwe kwụ otu ebe n'ime ga-eto site na afọ ma ọ bụ abụọ. M na-amalite. - Ee, ọ dabere.
Ọ bụrụ na ị nwere ike iweta onye mbido n'egwuregwu ahụ, enwere nhọrọ ka mma. Ọ na - enye gị ohere imeziwanye, echere m na m nwere nkụda mmụọ karịa ihe ọ bụla ọzọ. Know mara, ikike dị ebe ahụ dịka ọnụahịa, dịka eziokwu ahụ ọ dị ka ọ dị ezigbo njikere na akwụkwọ.
Ọ bụghị naanị oge a ka ọ bara uru. Bụ naanị onye ọkwọ ụgbọala nkịtị, ị chọghị imefu nnukwu ego, ọ gaghị egbochi gị. Mgbe ịmechara ihe ndị ọzọ na igwe kwụ otu ebe.
Nke a abụghị igwe kwụ otu ebe maka gị.- Kpọmkwem, nke a bụ Giant Stance. Nọrọ na-ege ntị maka ịnyịnya ígwè ndị ọzọ sitere na Pinkbikes Field Trip, gụnyere mkparịta ụka okpokoro gburugburu ebe anyị na-ekwu maka uru na ọghọm nke igwe ndị a niile. (egwu na-ada ụda)
Bụ igwe elekere iri anọ na isii nke ndị okenye?
26'+IgbaCycles - Kwesịrị ekwesị maka afọ 11 + (A na-ahazi ndị a dị kaokenyeokirikiri.)
Bụ igwe kwụ anọ nke 24 maka ndị okenye?
Nwanyị nwere ike ịgba ịnyịnya24-inch igwe kwụ otu ebemgbe ọ osobo arọ ibu na ya elu bụ dakọtara naigwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ n ’ọ na - esiri gị ike inwetaokenye igwe kwụ otu ebe, wee họrọ maka a24-inchụmụakaigwe kwụ otu ebenwere ike ịbụ a loophole gị.02.09.2020
Bụ nnukwu sr2 wiil tubeless?
Anyị zuru usorowiil, taya, valves na akara na-ewepu nsogbu na ajụjụ nke “TubelessNjikere ”ma ọ bụ“TubelessKwekọrọ n'Ozizi ”, site na ime ka ntọala ntọala dị mfe ma na-ekwe nkwa ndakọrịta.
Kedu ụdị wiil dị iche iche igwe buru ibu na-eji?
2021 Nnukwu SLR 1 42m Carbon Clincher Tubeless Ready Disc Wheelset. $ 1,500.00. Mbupu n'efu. ma ọ bụ onyinye kacha mma. 11 na-ele anya. Nnukwu SLR1 Carbon Clincher tubeless njikere njikere wheel wheel rim breeki. * Biko gụọ *.
pee wee herman na-agba ịnyịnya ígwè
Enwere akụkụ igwe gbara agba ọ bụla na UK?
Mbupu nke nnukwu ụlọ nkwakọba ihe nke Europe na UK na-egbu oge ugbu a. Anyị rịọ mgbaghara maka nke a. - Niile Kategorien - brek Cables Suspension & amp; Forks H / Ogwe & nkwupụta ụda; Njikwa Ndị ọzọ Bike Parts Taya, Tubes & nkwupụta ụda; Ọkụ P
Kedu ihe nkwado dị na nnukwu igwe kwụ otu ebe na-eme?
Wheels Pedals, Toeclips & nkwupụta ụda; Cleats Saddles & nkwupụta ụda; Seatposts Road Components MTB Components Hybrid / Leisure Components Chainrings Chains Cassettes, Freewheels & nkwupụta ụda; S Asụsụ & amp; Tensioners Ala brackets